Hevitra momba ny lalao - Pejy fandokoana ho an'ny ankizy maimaim-poana
Keyword: Hevitra momba ny lalao
Milalaova ao an-trano - hevitra tsotra momba ny lalao ao amin'ny trano
Huh? Toy ny ankehitriny, milalao ao anatiny. Aorian'ny volana fahavaratra dia toa hafahafa ihany izany, saingy toy ny isan-taona dia ho avy ny fotoana izay tsy ilalaovan'ny ankizy (any ivelany) intsony
Hevitra momba ny lalao ao an-trano
Fifaninanana fihinanana Muffin
Sary avy amin'ny Prashant Sharma amin'ny pixel
Satroka, fehiloha, fonon-tànana (mittens)
Muffin 1 isaky ny zaza
Antsy sy forkitra ho an'ny ankizy tsirairay
Ity lalao ity dia mitaky ny hafainganam-pandeha sy ny fahaizana ary azo antoka fa hihomehy vitsivitsy.
Mipetraka eo ambony latabatra ny ankizy rehetra ary omena muffin misy cutlery eo alohan'izy ireo, ary napetrakay teo afovoan'ny latabatra ny satroka sy ny sarondoha ary ny fonon-tanana. Avy eo dia mihodina mifandimby ireo dice. Ilay zaza manakodia 6 voalohany dia mametraka satroka sy scarf ary fonon-tànana haingana ary avy eo dia tsy maintsy mihinana antsy azy amin'ny antsy sy ny fork. Ny sasany manohy manodina ny dice, satria raha mihodina indray ny 6 dia anjaran'ny olona manaraka no mahazo haingana ny akanjo ririnina amin'ilay mpihinana farany izay tsy maintsy miala sasatra izao.
Izay afaka nihinana ny muffin aloha tao anatin'ireny toe-javatra sarotra ireny no mpandresy! "Milalao an-trano - hevitra lalao tsotra ao an-trano" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 13. September 2020 16. Oktobra 2020 Sokajy freetime sy fanatanjahan-tenaKeywords milalao ao an-trano, Fifaninanana fihinanana Muffin, milalao, Milalao ao amin'ny trano, Hevitra momba ny lalaoLeave a Comment milalao ao anaty trano - hevitra lalao tsotra ho an'ny ao amin'ny trano